Arsene Wenger oo si cad u sheegay shaqada uu qaban doono mustaqbalka dhow – Gool FM
Arsene Wenger oo si cad u sheegay shaqada uu qaban doono mustaqbalka dhow
(Yurub) 03 Abriil 2019. Tababaraha halyeeyga ah reer France ee Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in dhibaatooyinkii badanaa ee soo wajahay sanadihii u danbeysay kooxda Arsenal, inay si xun saameyn ugu yeelatay xaaladiisa caafimaad.
Arsene Wenger ayaa isaga dhaqaaqay shaqada tababarka ee kooxda Arsenal dhamaadka xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, kadib mudo dhan 22 sano uu macalin ka ahaa Gunners, iyadoo booskiisa lagu badalay Unai Emery.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mitro” ee dalka England Arsene Wenger ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee quseeya noloshiisa wuxuuna yiri:
“Noloshu, waxa jira waxyaabo aad dooran kartid adiga, halka kuwo kalena ay qasab kugu tahay inaad sameyso, xaaladdan oo kale, waxay ahayd isku darka labadan arin, sababtoo ah marxaladan, taageerayaashu waxay u baahnaayeen isbedel, sanadkii hore xaalada aad ayeey u adkeyd”.
“Sidaa daraadeed kala tagista waxay ahayd mid lama huraan ah, sidoo kale waxay ii ahayd gargaar aniga ahaan, sababtoo ah waxaan mas’uuliyadan dhabarka u soo ritay muddo dheer, waa arrin aad u adag”.
“Sanadkii lasoo dhaafay waxaan dareemay inaan bilaabo hoos u dhac dhanka caafimaadka ah”.
Si kastaba tababarihii hore ee kooxad Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay inuu diyaar u yahay haatan dib ugu laabashada shaqada tababarka, isagoo sheegay in mashruuciisa soo socda uu noqon doono inuu leyliyo mid ka mid ah xulalka qaramada kahor Koobka Adduunka 2022.
Tababare Solskjær oo qorsheenaya inuu qaado tallaabo uu horey u qaaday Louis van Gaal